Umfakisicelo Sokulingana Komphakathi e-Illinois Insangu Kokusemthethweni
Izicelo Zokulingana Komphakathi e-Illinois
Umfakisicelo sokulingana kwezenhlalo e-Illinois insangu angathola izimali zesifundazwe ezikhethekile ukwehlisa izindleko zokuvula ibhizinisi labo lokusebenzisa abantu abadala - funda kabanzi lapha.
Yini umfakisicelo wokulingana kwezenhlalo e-Illinois?
umfakisicelo wokulingana kwezenhlalo i-Illinois
Umfakisicelo Sokulingana Komphakathi e-Illinois unikela ngama-20% esamba esiphelele sesicelo selayisense leqembu le-cannabis.
Kungani i-Illinois Inezicelo Zokulingana Komphakathi?
Ngokusho kocwaningo olwenziwe esifundazweni sase-Illinois, kwatholakala ukuthi imikhawulo yemithetho yangaphambilini yenze kwaba nzima kubantu abaningi ukujoyina imboni yensangu, futhi lokhu kwadala ukungalingani emphakathini okuye kwaqhubeka kukhula usuku nosuku. Umthetho omusha we-Illinois uhlose ukulungisa lokhu ngokudala “Izicelo Zokulingana Komphakathi” ukunciphisa izithiyo ebezinqanda abantu phambilini ukuthi bangene embonini ngaleyo ndlela kudaleke ukulingana kwezenhlalo e-Illinois cannabis. Imigoqo enjalo ibandakanya ukuntuleka kwemali ngenxa yobuphofu, phakathi kwezinye izinto.
Abafakizicelo Zokulingana Kwezenhlalo iPodcast yase-Illinois
Ukufunda umthetho wokufaka isicelo sokulingana kwezenhlalo e-Illinois - Chofoza lapha
Ukuze Imephu Yendawo Engathinteki ngokungafani - Chofoza lapha
Isichasiso Sesicelo Somphakathi Esilinganayo e-Illinois
“Umfakisicelo Sokulingana Komphakathi" kusho umuntu ofaka isicelo ongumhlali wase-Illinois ohlangana naye Enye yezindlela ezilandelayo:
(1) umfakisicelo onobunikazi obungaphezulu kwama-51% nokulawulwa ngumuntu oyedwa noma ngaphezulu osehlale okungenani iminyaka emi-5 kuleyo minyaka eyi-10 eyandulelwe yiNdawo Enomthelela Othile;
(2) umenzi wesicelo onobunikazi okungenani obunama-51% nokulawulwa ngumuntu oyedwa noma ngaphezulu:
(i) oboshelwe, alahlwe yicala, noma okwahlulelwa ubuqili nganoma yiliphi icala elifanelekile ukuba lixoshwe ngaphansi kwalo mthetho; noma
(ii) uyilungu lomndeni onomthelela;
(3) kwabafakizicelo abanabasebenzi okungenani abangama-10 besikhathi esigcwele, umfakisicelo onabasebenzi okungenani abangama-51% abakhona
(i) njengamanje ngihlala endaweni engeneme ngokwentuthuko; noma
(ii) aboshelwe, alahlwe yicala, noma agwetshwe inkohliso nganoma yisiphi isenzo esifanelekile ukuba sicishwe ngaphansi kwalo mthetho noma ilungu lomndeni othintekile.
Umfakisicelo Wokulingana Kwezenhlalo Kwezifundazwe Zase-Illinois Cannabis
Ngo-Okthoba 1, 2019 - The I-State of Illinois idedele uhlelo lwayo lwensiza yokufaka insangu. Lolu hlelo lokusebenza belunolimi olubaluleke kakhulu lwethalente lakho lokulingana kwezenhlalo eqenjini lakho.
Uma umfakisicelo efisa ukufaka isicelo njengoMenzi Wezicelo Zokulingana Komphakathi, nikeza ubufakazi besimo soMfakisicelo Sokulingana Komphakathi. Ubufakazi besimo njengomfakisicelo wokuLingana Kwezenhlalo bungasungulwa ngokuhlinzeka:
Ubufakazi besimo somuntu ofaka isicelo njenge "mhlali wase-Illinois" njengoba kukhonjisiwe ngemibhalo yokufaka, noma, uma kusebenza njengomuntu, okungenani okulandelayo: (i) isivumelwano sokuqashisa esisayiniwe esifaka igama lomfakisicelo, (ii) itayitela lendawo yokuhlala ebandakanya igama lomfakisicelo, (iii) isikole amarekhodi, (iv) ikhadi lokubhalisela ukuvota, (v) ilayisense lokushayela lase-Illinois, umazisi, noma umuntu onomazisi wokukhubazeka, (vi) i-paycheck stub, (vii) umthethosivivinywa wosizo, noma (viii) obunye ubufakazi yokuhlala noma olunye ulwazi oludingekayo lokusungula indawo yokuhlala. Umuntu kumele abuswe kuhulumeni isikhathi esiyizinsuku ezingama-30 ukuze abe “yisakhamuzi sase-Illinois” njengoba kusetshenziswe kulolu hlelo lokusebenza; futhi
Ubufakazi bokuthi umuntu noma abantu abangabanikazi futhi abalawula ngaphezu kwe-51% yenhlangano ehlongozwayo yokuhambisa bahlala ku Indawo Enomthelela Omubi okweminyaka engu-5 eyishumi eyedlule njengoba kukhonjisiwe, kodwa kungagcini lapho, ukufakwa kwentela, ukubhaliswa kwabavoti, ukuqashisa, imalimboleko, iziqu zokukhokha, izikweletu zomsebenzi, amafomu womshuwalense, noma amarekhodi esikole afaka amagama ezikhulu ezifanele or
Ubufakazi umuntu noma abantu abangabanikazi futhi abalawula ngaphezu kwe-51% yenhlangano ehlongozwayo yokuhambisa selukhona uboshelwe, alahlwe yicala noma akhiphe isinqumo sokwephula umthetho ngenxa yanoma iliphi icala elenziwe likufanele ukuqothulwa nguMthetho Wezomphakathi 101-0027. Uma ukuboshwa, ukulahlwa yicala, noma ukwahlulelwa kubekwe uphawu noma kuchithwe, anikeze amarekhodi esenzo esinjalo; or
Ubufakazi bokuthi umuntu noma abantu abangabanikazi futhi abalawula ngaphezu kwe-51% yenhlangano ehlongozwayo yokuhambisa babe umzali, umnakekeli osemthethweni, ingane, umlingani, owayethembekile, noma owayeyi-of umuntu o Ngaphambi kukaJuni 25, 2019, waboshelwa, watholwa enecala, noma ekwahlulelwa inhlamba kunoma yiliphi icala elenziwa lafanelwa ukucekelwa phansi koMthetho Womphakathi 101-0027. Uma ukuboshwa, ukulahlwa yicala, noma ukwahlulelwa kubekwe uphawu noma kuchithwe, nikeza amarekhodi esenzo. Umfakisicelo kumele futhi anikeze ubufakazi bobu budlelwano obuphakathi kwesikhulu noma umphathi omkhulu womfakisicelo nomuntu oboshelwe, alahlwe yicala, noma ahlulele inkohliso nganoma yiliphi icala elenziwe lifanelekile ukuba lichithwe nguMthetho Womphakathi 101-0027; or
Ubufakazi bokuthi umenzi wesicelo usebenzisa izisebenzi zesikhathi esigcwele ezi-10 noma ngaphezulu, nobufakazi bokuthi ama-51% noma ngaphezulu alabo basebenzi azokwazi ukuthola iziqu zeSocialityityity ngaphansi kwendlela ebekiwe enikezwe izinto 2, 3, no-4 ngaphezulu, uma abasebenzi bezizosebenza ungumnikazi futhi ulawule i-51% yenhlangano ehlongozwayo yokuhlinzekwa. Ofaka isicelo angahlinzeka ngobufakazi njengoba buchaziwe ngenhla kwisisebenzi ngasinye. Umfakisicelo uzohlinzeka nangobufakazi izisebenzi ezazenza umsebenzi wesikhathi esigcwele kusukela ngosuku lokufakwa kwesicelo. Uma imininingwane yesisebenzi noma isimo somsebenzi soshintsho sabasebenzi ngaphambi kokunikezwa kwamalayisense, umenzi wesicelo unesibopho sokwazisa isigaba soguquko olwazini noma ngesimo somsebenzi.
Okuningi Ngokulingana Komphakathi e-Illinois Cannabis
Ukusetshenziswa kwesihawu kwe-Medical Cannabis Pilot Program Act 2014 Ukuntula Ukulingana Komphakathi
Ukusetshenziswa kwesihawu kuka-2014 kwe-Medical Cannabis Pilot Program Act evumela ukusetshenziswa kwensangu yezokwelapha bekunciphise kakhulu kubantu abafuna ukutshala imali embonini yensangu. Lesi senzo size nezihibe ezenze kwaba nzima ukuthi abantu babe namabhizinisi kulo mkhakha. Abanikazi abambalwa njengamanje abayisilo isibalo sabantu bonke besifundazwe ngoba baxhuma noma ngubani ongenazo izinsiza noma owazi ukuthi angamisa kanjani ibhizinisi kulo mkhakha.
Uhlelo lokulingana kwezenhlalo lwasungulwa ngemuva kokuthi kutholakale ukuthi uhlelo lokushayela izindiza alunankinga. Lolu hlelo lwenzelwe ukusiza labo abaye bahlupheka kabi ngenxa yemithetho ekhawulelwe i-cannabis phambilini. Uhlelo lolu futhi lwenzelwe ukusiza labo abahlala ezindaweni ezisetshenziselwe ukungancishwa ngenxa yokuboshwa kanye nokufakwa ejele okuhlobene nentsangu. Ngokomthetho omusha,
"I-General Assembly iyaqhubeka nokuthola ukuthi kuyadingeka ukuthi kuqinisekiswe ukuthi ukusebenza kwalo mthetho kuhambisana kulo lonke izwe nokulingana."
Ngabe Umthetho Omusha Uzomthinta Kanjani Umfakisicelo Wokulingana Komphakathi?
Ukuthola ngokusemthethweni ukusetshenziswa kwensangu yokuzijabulisa e-Illinois kuzothinta wonke umuntu esifundazweni, hhayi abathengi bensangu kuphela. Ngomzamo wokuqinisekisa ukulingana kwezenhlalo, umthetho wenzelwa ukuthi kube lula ukuthi imiphakathi ebekelwe ubumfihlo ifinyeleleke kumalayisense okusebenza. Ngaphezu kwalokho, noma ngubani owenza isicelo sobulungiswa bezenhlalo ngokufanele uzothola amaphuzu angaphezu kwamaphesenti angama-20 anikezwe labo bafakizicelo. Lawa maphuzu azohlukaniswa ngezigaba ezahlukahlukene zabafakizicelo zezindawo zokutshala ezinemibandela, umsebenzi wezandla ukhula, noma wamakhefu.
Ngokomthetho, umfakisicelo wokulingana kwezenhlalo kuzoba yinoma ngubani oyisakhamuzi sase-Illinois, osehlale engxenyeni yombuso ethinteka ngokungafanele okungenani iminyaka eyi-5 yeminyaka eyi-10 edlule. Ngokuvamile lezi yizindawo lapho kuye kwaboshwa khona okuningi, ukutholwa kwezinkantolo, kanye nokuboshwa ngemuva kokuphulwa kwesenzo se-cannabis esedlule. Labo amarekhodi abo aqothulwa ngaphansi kwalesi senzo nabo bafanele ukulingana kwezenhlalo.
Iziphi ezinye Izingqinamba Zokulingana Kwezenhlalo Ezizokhulunywa Ngalo mthetho?
Lo mthethosivivinywa uzobheka amalungelo abasebenzi abasebenza embonini yensangu. Ngokungafani naphambilini lapho abasebenzi embonini yensangu babandlululwa khona, manje sebezokujabulela ukuvikelwa okufanayo nabasebenzi abakwamanye ama-mboni.
Kuthiwani ngeSikhwama Sokuthuthukiswa Kwebhizinisi sase-Illinois?
Ngokomthetho omusha wase-Illinois wokugunyazwa kwensangu, “Emnothweni Wombuso kudaleke isikhwama esikhethekile, esizobanjwa sihlukaniswe futhi singahlanganiswa nazo zonke ezinye izimali zoMbuso, ezizokwaziwa ngokuthi yiCannabis Business Development Fund”.
Le kitty ekhethekile ebekelwe labo abafuna ukungena embonini yensangu. I-kitty yakhelwe ukuthi isetshenziselwe ukuxhasa ngezimali, ukuxhasa, futhi yenze kube lula kubantu abathanda ukujoyina imboni yensangu kodwa bencishwe amathuba ngokwezimali.
Ezinye izindlela isikhwama lesi esizosiza ngazo ukufaka phakathi:
Ukunikeza imalimboleko ngamanani wenzalo ephansi. Lezi zimalimboleko zizosetshenziswa ngabantu abafaka izicelo zokulingana kwezenhlalo ukusungula amabhizinisi e-cannab inqobo nje uma benamalayisense ngokulandela umthetho.
Ukunikeza izibonelelo kulabo abafaka izicelo zokulingana kwezenhlalo abangahle bafune ukuqala futhi basebenzise amabhizinisi e-cannabis kepha abangenawo amandla wezezimali okwenza lokho.
Ukukhokhela ukufinyelela okuhlose ukuzuzisa abafaka izicelo zokulingana kwezenhlalo
Ukukhokhela ucwaningo olwenzelwe ukukhuthaza ukubamba iqhaza kwabesifazane, abakhubazekile, namaqembu amancane emphakathini.
Kungani Uhlelo Lokulingana Komphakathi Lungumqondo Omuhle
Labo ababoshwe noma baboshwe bavame ukuhlushwa imiphumela emibi ehlala isikhathi eside. Lokhu kungenxa yokuthi iningi labaqashi ngeke liqashe muntu irekhodi, kanti abanye bamane babandlulula ababoshwa. Eqinisweni, labo ababoshwe phambilini ngenxa yokuthola insangu bayaqhubeka nokuhlupheka noma ngemuva kokusetshenziswa okufanayo kwenziwe kube semthethweni. Abalingani, izingane, nezihlobo zabathintekile nazo zihlupheka ngokwezezimali nangokomzwelo lapho izihlobo zazo ziya ejele.
Lolu hlelo luhlinzeka ngezinzuzo zombili zezicelo zamalayisense kanye nosizo lwezezimali kubantu abathinteka emithethweni yokuhlaselwa okuhlobene ne-cannabis kungaba ngokuqondile noma ngokungaqondile.
Ubani Ofanelekela ukufaka isicelo Sokulingana Komphakathi?
Abafaka izicelo zokulingana kwezenhlalo ngabantu abahlangabezana nezidingo ezimbalwa zokuthola ilayisense elinemibandela lokuqhuba ibhizinisi le-insangu ngaphakathi kombuso. Ezinye zalezi zidingo zifaka:
Umuntu ohlala endaweni efanelekela ukubhekelwa ukulingana kwezenhlalo. Ukuhlala kuleli cala kusho ukuthi ube nokuqashisa okusayiniwe okunamagama omfakisicelo noma itayitela lendawo.
Ikhadi labavoti, ilayisense lokushayela, i -checheck, nanoma yiluphi uhlobo lwekhadi elisetshenziswayo kuzosetshenziselwa ukunquma ubunyoninco.
Ngabe uthini umthetho mayelana nokufikelwa amacala?
Labo abasebenzise isikhathi sokutholakala nensangu nokusetshenziswa kwabo bayabhekwa nasemthethweni. Ngokomthetho omusha wase-Illinois, uma icala selivaliwe noma likhishwa emsebenzini, isisebenzi ngeke kudingeke ukuthi sidalule icala laso elidlule kulowo ongase abe ngumqashi. Lokho kushiwo, umthetho awuklanyelwe ukukhawulela umqashi maqondana nemisebenzi. Umqashi usenelungelo lokuhlola isizinda futhi alandele izinqubo ezifanayo zokuqashwa abazisebenzisela abanye abasebenzi.
Wenzani Uma Ufanelekela Ukuzuza Ekulungiseleleni Ukulingana Komphakathi?
Akungatshazwa ukuthi imboni ye-cannabis inenzuzo enkulu. Uma ufuna ukusetha ibhizinisi kule mboni futhi ufanelekele ukucatshangelwa ngokulingana kwezenhlalo, kufanele ucabangele ukuthumela isicelo sakho ngaphansi kwesigaba sokulingana kwezenhlalo.
Uma unenhlanhla, uhlelo lwakho lokusebenza kungenzeka lungagcini ngokuvunyelwa kuphela kodwa futhi ungasizakala ngoxhaso lwezimali lukahulumeni olungasetha ukuqhutshwa kwebhizinisi lakho lubeke ngaphambi komncintiswano. Izindaba ezimnandi ukuthi imali ayikhokhelwa kakhulu kepha itholwa yizakhamizi zase-Illinois.
Thintana nommeli ofanelekayo we-cannabis uma ungaqiniseki ngenqubo yesicelo noma uma ungazi ukuthi ungazuza kanjani kangcono ngamaphoyinti wakho wokulingana kwezenhlalo.
Isikripthi Sokulingana Komphakathi
Kwenzenjani, NginguTom - ngithole ngokubheka ummeli weCannabis, bese uchofoza iwebhusayithi yami, imboni yensangu i-lawyer.com. Isisetshenziswa esiku-inthanethi sayo yonke imibuzo yakho mayelana nokuzulazula embonini ye-cannabis - njengesihloko esishisayo sanamuhla e-Illinois - Abafakizicelo Bezokulingana Komphakathi.
Sizongena kuwo futhi uzokwazi lo mthetho kangcono kuno-99% wabantu uma ubuka kuze kube sekupheleni, ingqondo iqhuma lapho - kepha ngemithetho ye-YouTube, kufanele ngikukhumbuze ukuthi uthande futhi ubhalise.
Ake singene ngaphakathi.
Isigaba sesi-7 soMthetho siphathelene nabafakizicelo bokulingana kwezenhlalo - kepha ngeke nje sigxumele lapho okwamanje - okokuqala kudingeka sibuyekeze incazelo yangempela yomfakisicelo wezenhlalakahle ngaphansi komthetho wase-Illinois - ukuze siye ezincazelweni.
“Umfakisicelo Wokulingana Komphakathi” kusho ofaka isicelo sokuthi ungumhlali wase-Illinois ohlangabezana nenye yale mibandela elandelayo:
Ngabe uwubonile umehluko - izinkampani ezincane zidinga kokubili "ubunikazi nokulawulwa" kwalabo abafaka izicelo zokulingana kwezenhlalo, kepha izinkampani ezinkulu zidinga nje izinombolo eziluhlaza zabasebenzi. Ngemuva kwalokho ungagcina ukulawula nokuphatha noma ngabe ufuna kanjani.
Ngakolunye uhlangothi, ibhodi labaqondisi - abanikazi nabalawuli benkampani baba ngumsebenzi wokwakha iqembu - futhi abakwazi ukulinda ukukusiza kulokho.
Manje njengoba sesazi ukuthi uyini umfakisicelo se-Social Equity - kungani sifuna ukuba ngomunye wabo? Ngoba umthetho ubathanda ngezindlela ezi-2 ezicace bha: 1) ngokunikela okungenani ama-20% wamaphoyinti wokufaka izicelo ezikhungweni zemisebenzi yezobuciko kanye nezobuciko kanye no-2) ngokunikeza ukufinyelela kwizimalimboleko zikahulumeni ezinenzalo ephansi ukwehlisa imigoqo yokungena emakethe yezinkukhu ezisemthethweni .
Isigaba 7- 10 somthetho omusha we-cannabis sakha iSikhwama Sokuthuthukiswa Kwebhizinisi seCannabis ukuhlinzeka ngamanani wemalimboleko ephansi kubafakizicelo be-equity yezenhlalo ukukhokhela izindleko zebhizinisi ezidingekayo ukusebenza kwebhizinisi labo le-cannabis.
Ngaphezu kwalokho, izibonelelo zitholakala “kubafakizicelo abafanelekile kwezenhlalo” ukukhokhela izindleko zebhizinisi elijwayelekile nelidingekayo ukuqalisa nokwenza ibhizinisi labo le-cannabis.
Yini “ofaka isicelo sokulingana kwezenhlalo”? Sibuyela ezincazelweni ukuthola ukuthi:
“Umfakisicelo Wokulingana Ngokulingana Komphakathi” kusho uMfakisicelo Wezokulingana Komphakathi onikezwe ilayisensi enemibandela ngaphansi kwalo Mthetho ukuze asebenze inkampani yamabhizinisi insangu.
Kuhle - yini “ilayisensi enemibandela”?
“Ilayisensi yeNhlangano Yokusebenzisa Abantu Abadala Enemibandela” kusho ilayisense enikezwa abafaka izicelo abathola amaphuzu aphezulu ngelayisense yeNhlangano Yokusebenzisa Abantu Abadala enelungelo lokusebenzisa ilayisense lenhlangano elisebenzisa abantu abadala uma umenzi wesicelo ehlangabezana nemibandela ethile echazwe kulo Mthetho, kodwa engenalo ilungelo umamukeli aqale ukuthenga noma ukuthengisa insangu noma imikhiqizo efakwe insangu.
Kulungile, iziko lokutholwa elitholakele, kepha ngaphambi kokuthi livulwe - I-Coool… ungazama ukuthola izibonelelo uma isimo somuntu ofaka isicelo se-Social Equity ekutholela ilayisense… bese ufaka isicelo soxhaso… bese uyakha bese uyavula .. Singakhula yini insangu bese uthola isibonelelo? Ake sihlole.
Oh kuphole, kukhona ilayisense elandelwayo yokulima.
“Ilayisense Yesikhungo Sokulima Sabantu Abadala Esinemibandela” kusho ilayisensi enikezwa abafaka izicelo abathola amaphuzu aphezulu ngelayisense yeSikhungo Sokulima Sabantu Abadala eligodla ilungelo leLayisense Yesikhungo Sokulima Sabantu Abadala uma umenzi wesicelo ehlangabezana nemibandela ethile njengoba kunqunywe uMnyango Wezolimo ngomthetho , kepha ayinikezi umamukeli ithuba lokuthi aqale ukutshala, ukucubungula, noma ukuthengisa insangu noma imikhiqizo efakwe insangu.
Hhayi-ke mangaki amalayisense akhona? 30 - Kuhle, kodwa linda abadlali bamanje bazalwe, ngakho-ke bangaki labo, ama-20 - amantongomane, kulungile sehlele ku-10.
Yebo mhlawumbe kubi kakhulu kunalokho ngoba,
Isigaba 20-15. Ukusetshenziswa kwesikhungo sokulima abantu abadala esinemibandela. (a) Uma uMnyango wezoLimo wenza ukuthi kutholakale amanye amalayisense esikhungo sokulima ngokulandela iSigaba 20-5, abafaka isicelo selayisense Lesikhungo Sokusetshenziswa Kwabantu Abadala Kwemibandela kufanele balethe lokhu okulandelayo ngendlela uMnyango wezoLimo ongayala ngayo:
Ngakho-ke ukulima ukusetshenziswa kwabantu abadala okunemibandela kwenzeke, ngaphezu kwezindawo eziyi-10 zamanje ezidinga ukuvela ku-inthanethi, i-bummer, ngakho-ke ake sigxile kulezo zixhaso zezimali bese sibheka ukuthi yiziphi izinhlobo zezimali ezikhona.
(c) Izimali mboleko ezenziwe ngaphansi kwalesi Sigaba:
(1) siyokwenziwa kuphela uma, ngokwesahlulelo soMnyango, iphrojekthi iqhubekisela phambili izinhloso ezibekwe kulo Mthetho; futhi
(2) lizoba ngalelo nani eliyinhloko futhi lifake futhi liqukethe leyo migomo nezinhlinzeko maqondana nokuphepha, umshuwalense, ukubika, izindleko zobunyoninco, amakhambi okuzenzakalelayo, kanye nezinye izindaba njengoba uMnyango uzonquma ukuthi kufanelekile ukuvikela izintshisekelo zomphakathi futhi zihambisane. ngezinhloso zalesi Sigaba. Amagama nezinhlinzeko zingaba ngaphansi kokudingekayo kwezimali mboleko ezifanayo ezingekho ngaphansi kwalesi Sigaba.
(d) Izibonelelo ezenziwa ngaphansi kwalesi Sigaba zizonikezwa ngokuncintisana futhi ngonyaka ngonyaka ngaphansi komthetho iGrant accountability and Transparency Act. Imali eyisibonelelo eyenziwe ngaphansi kwalesi Sigaba izothuthukisa futhi ithuthukise izinhloso zalo mthetho, kufaka phakathi ukukhuthaza Abafakizicelo Zokulingana Kwezenhlalo, ukuqeqeshwa kwabasebenzi kanye nokuthuthukiswa kwabasebenzi, kanye nosizo lwezobuchwepheshe Kwabenzi bezicelo Zokulingana Komphakathi.
Ngakho-ke lokho kusisa embuzweni - senza izicelo ezihamba phambili, ngakho-ke sifuna ukuba namaphoyinti okulingana kwezenhlalo, kepha ingabe sifaka inqubo yokubhala yesibonelelo ezinhlelweni zokusebenza - sikholwa ukuthi kufanele ukwandise amaphuzu.
I-20% yesicelo sakho iya kuwe njengomfakisicelo wezimali zenhlalo. Kepha kubukeka sengathi abantu abaningi bafanelekile, ngaphezulu kwe-800,000 evulelwe ukuxoshwa ngaphansi komthetho, nabantu abahlala emiphakathini ehlwempu - kepha yini oyithola emtholampilo wakho kulowo mphakathi ukusiza ukulungisa izinkinga zempi yezidakamizwa? Kulapho-ke lapho yonke indaba yenkampani yakho ingachuma futhi ilethe ushintsho oluhle emphakathini.
Lokhu kudinga ukungena kuhlelo lwakho lokuqeqesha kanye nokufinyelela emphakathini. Cabanga nje uma abaxhasi bakho basemtholampilo bexosha futhi bekhombisa umsebenzi unyaka nonyaka? Ngokubambisana nezinhlangano zendawo zabameli kanye namabhizinisi e-cannabis adinga abasebenzi abaqeqeshiwe.
Lezo yizinto inkampani yakho - ikakhulukazi uma ifuna amaphuzu okulingana kwezenhlalo - okufanele izicabangele lapho ihlanganisa isicelo sayo selayisensi ye-cannabis.
Ngabe uyabhanga kwizimalimboleko? - akunakwenzeka. Awusoze waba nelungelo lokubolekwa imali, noma lesibonelelo - kufanele ufaneleke. Yiba nezimali ngokuhleleka nganoma iyiphi indlela. Izicelo zizobiza kakhulu ukuthunyelwa ngenxa yokuthi zinkulu kangakanani - futhi ngaphandle kwalokho abanye abantu abangakholelwa kukho, abameli badinga ukukhokhelwa isikhathi sabo kanye nokusebenza kwabo. Ikakhulukazi uma ummeli wakho enezentengiselwano eyanele ngokwanele ukuba anikelwe ngasese okungaphansi kwamadola ayizigidi ezinhlanu namasheya akhethwayo wokubamba iqhaza okwengeziwe kwabafakizicelo bokulingana kwezenhlalo
Ukusetshenziswa kwesihawu kwe-Medical Cannabis Pilot Program Act 2014
The Ukusetshenziswa kwesihawu kuka-2014 kwe-Medical Cannabis Pilot Program Act obekuvumela ukusetshenziswa kwensangu yezokwelapha bekuncipha kakhulu kubantu abafuna ukutshala imali embonini yensangu. Lesi senzo size nezihibe ezenze kwaba nzima ukuthi abantu babe namabhizinisi kulo mkhakha. Abanikazi abambalwa njengamanje abayisilo isibalo sabantu bonke besifundazwe ngoba baxhuma noma ngubani ongenazo izinsiza noma owazi ukuthi angamisa kanjani ibhizinisi kulo mkhakha.
Uhlelo lokulingana kwezenhlalo lwasungulwa ngemuva kokuthi kutholakale ukuthi uhlelo lokushayela izindiza alunankinga. Lolu hlelo lwenzelwe ukusiza labo abaye bahlupheka kabi ngenxa yemithetho ekhawulelwe i-cannabis phambilini. Uhlelo lolu futhi lwenzelwe ukusiza labo abahlala ezindaweni ezisetshenziselwe ukungancishwa ngenxa yokuboshwa kanye nokufakwa ejele okuhlobene nentsangu. Ngokomthetho omusha, "I-General Assembly iyaqhubeka nokuthola ukuthi kuyadingeka ukuthi kuqinisekiswe ukuthi lo mthetho usetshenziselwa lo mthetho kulo lonke izwe."
Umthetho Omusha Uyowuthinta Kanjani Umphakathi?
Ukuthola ngokusemthethweni ukusetshenziswa kwensangu yokuzijabulisa e-Illinois kuzothinta wonke umuntu esifundazweni, hhayi abathengi bensangu kuphela. Ngomzamo wokuqinisekisa ukulingana kwezenhlalo, umthetho wenzelwa ukuthi kube lula ukuthi imiphakathi ebekelwe ubumfihlo ifinyeleleke kumalayisense okusebenza. Ngaphezu kwalokho, noma ngubani ofaka isicelo sokulingana kwezenhlalo uzovele athole amaphuzu angama-25 amabhonasi. Lawa maphuzu azohlukaniswa ngezigaba ezahlukahlukene zabafakizicelo abanokulingana kwezenhlalo nakulabo abase-Illinois.
Yiziphi Ezinye Izinkinga Zomphakathi Ezizokhulunywa Ngalo mthetho?
Kuthiwani ngesiKhwama Sokuthuthukisa Amabhizinisi?
Ngokwalo mthetho, "Kudalwe eMnyangweni wezeziMali imali eyisipesheli, ezobanjwa yodwa ngaphandle kwazo zonke ezinye izimali zoMbuso, ezokwaziwa ngeCannabis Business Development Fund".
Labo abasebenze isikhathi sokuthola insangu nokusetshenziswa bayabhekwa nasemthethweni. Ngokomthetho omusha wase-Illinois, uma icala libekwe uphawu noma lichithwe, isisebenzi ngeke sidingidwe ukuthi sidalule icala laso elidlule kumqashi ongaba khona. Lokhu kushiwo, umthetho awuhloselwe ukukhawulela umqashi ngokuqondene nemisebenzi. Umqashi usenelungelo lokwenza isheke ngemuva futhi alandele izinqubo ezifanayo abazisebenzisela abanye abasebenzi.
Thintana ne ummeli we-cannabis ofanelekayo uma ungaqiniseki ngenqubo yesicelo noma ungazi ukuthi ungazuza kanjani kangcono ngamaphoyinti wakho wokulingana kwezenhlalo.